एप्पल कार्ड, एप्पल को भुक्तानी सेवा मा एक कदम अगाडी आईफोन समाचार
टिम कुकले एप्पल पे प्रणालीको वरिपरि नयाँ सेवा घोषणा गर्‍यो. यो बारेमा छ एप्पल कार्ड, क्रेडिट कार्डको पूर्ण पुन: डिजाइन हामी यो जान्दछौं। ठूलो स्याउ को लक्ष्य गरिएको छ एक क्रेडिट कार्ड सिर्जना गर्न को झन्झट हटाउनुहोस्।
क्रेडिट कार्ड हो आईफोनबाट भाडामा लिनुहोस् र यो काम गरिएको पहिलो मिनेटबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस सेवाका फाइदाहरूको विश्लेषण हुनुपर्दछ, तर जसरी हामीले उन्नत गरेका छौं, विकल्पहरू वास्तवमै रोचक छन्।
एप्पल पे को अर्को चुनौती: एप्पल कार्ड
यो बारेमा छ एप्पल क्रेडिट कार्ड यी क्रेडिट कार्डहरू अनुरोध गर्न सकिन्छ जबसम्म हामीसँग तपाईंको एप्पल आईडीको साथ आईओएस उपकरण छ। यो गोल्डम्यानसच बैंक र मास्टरकार्ड द्वारा समर्थित छ। वालेट अनुप्रयोग भित्र समावेश भएको प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस एकदम चाखलाग्दो छ किनकि यसले तपाईंलाई एक गर्न अनुमति दिन्छ हामीले गर्ने खर्चको नियन्त्रण, विभिन्न कोटीहरूमा संगठित: फुर्सत, खाना, काम, आदि। थप रूपमा, अनुप्रयोग भित्र देखाइएको ग्राफहरू तपाईंलाई फरक विचारमा खर्च गर्न भिजुअल नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ: मासिक, साप्ताहिक वा वार्षिक।
थप रूपमा, तिनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् के भनेर चिनिन्छ दैनिक नगद, तपाईंको खातामा एक प्रतिशोध तपाईले खरीद गर्नुहुने ठाउँमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं यो कार्डको साथ एप्पलबाट खरीद गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई फिर्ता रकम फिर्ता हुनेछ 3% तपाइँको खरीद को। यदि तपाईं एप्पल पे, २% सँग उपयुक्त कुनै स्थापनामा यो गर्नुहुन्छ। र, यदि तपाईं कार्डको साथ खरीद गर्नुहुन्छ, 1%.
अर्कोतर्फ, उनीहरूले यसको महत्वलाई प्रकाश पारेका छन् गोपनीयता एक वित्तीय को रूप मा नाजुक क्षेत्रमा। एप्पलबाट उनीहरू आश्वासन दिन्छन् कि उनीहरूसँग पहुँच गर्न सक्दैन के, कति र कहाँ खरीद गरिन्छ। अर्कोतर्फ, कार्डहरू प्रदान गर्ने बैंक, गोल्डम्यानस्याक्स पनि बेच्ने वा नाफाको लागि हाम्रो डाटा प्रयोग गर्दछ।
एप्पल कार्ड यो वालेट एप्लिकेसनमा यो वर्षको गर्मीमा उपलब्ध हुनेछ र, सबै सेवाहरूको बारेमा सबै समाचारहरूमा जस्तो, केवल संयुक्त राज्यमा। भौतिक कार्ड यो अनुप्रयोगबाट संकुचित भएको समयमा खरीद गर्न सकिन्छ र साथै, जिज्ञासाको रूपमा यो म्याद समाप्त हुँदैन, यसमा CVV नम्बर वा कार्ड नम्बर छैन, सबै आईओएस उपकरण को अनुप्रयोग बाट प्रबंधन गरीएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » हाम्रो बारेमा » एप्पल कार्ड, एप्पलको भुक्तानी सेवामा एक कदम अगाडि
AppleNews +, एप्पलको नयाँ समाचार र पत्रिका सेवा